Date My Pet » rudo 7 Easy Matanho
Pakunyanya kuda ndechimwe chezvinhu mashiripiti manzwiro munyika. Akazadzwa yakaisvonaka mufaro nokugutsikana, kuva murudo nemunhu rworudyi kunoita kuti unzwe sokuti unogona kukunda chero. Kana tichinyatsoda munhu, kuona zvose mufaro uye kusuwa uchapupu chaiye okutendeseka pedyo ari ukama. Nepo rudo kuoma, pazasi takaita ataurwa chii rudo uye sei kuti vabudirire zvechigarire rudo 7 matanho nyore.
Your mweya naye kumirira kuwanikwa. Vazhinji nguva, munoziva pakarepo kana ukasangana imwe hafu yako, nokuti mweya yenyu vaviri batanidza uye iwe uchava sokuti iwe kuzviziva zvachose. Kana wawana ichi, zvakakosha pfungwa chete pamusoro positives. Kutsvaka zvikanganiso mudiwa wako chete kutungamirira nokurwadziwa. Dzidza pakubvuma ose zvinoumba mudiwa wako uye kudzoka, muchapiwa kuvimbika husingaperi uye rudo.
Step #2: Tigutse zvido mudiwa wako zvinodiwa
Chero ukama zvakakosha kuti zvaunoda zviri pakati nepakati vamwe vako. Vazhinji nguva uchange uri papeji chete asi pachange dzimwe nezvezviitiko uye nguva apo zvaunoda zvakasiyana. Zvakakosha kuti zviise mudiwa wako kuti shangu nechokwadi chokuti vose zvavo zvavanoda.
Step #3: Teerera mumwe wako
Kuteerera munhu waunoda ndiyo nzira yakanakisisa yokudzidza ndivanaani kuwedzera sei kusangana zvavanoda. Zvichakubatsirawo kukubatsira kunzwa kunofambidzana mudiwa wako, kunzwisisa kwavakanga vari voga zvinotitambudza, kuvatsigira munguva dzokushayiwa, uye vanoona dzakasiyana kubatsira uye kuvaita kunyemwerera. Sevanhu, tiri kuramba kudzidza uye kukura ndokusaka kuteerera kunokosha pakuchengeta rudo rwenyu.
Step #4: Koshesa mudiwa wako
Zvechokwadi tichikoshesa zvinhu zvose zvakanaka pamusoro mumwe wako uye zvinhu zvakanaka ivo chichabatsira kusimbisa ukama hwako. Kufunga zvakanaka zvinoita kuti zvive nyore kuti zvimwe zvinhu kuenda, hanya zvinovhiringidza besano, uye kubvuma basa kurarama kune vamwe vako tarisiro.
Step #5: Wana nguva yokuva nomumwe wako
Kuronga nguva yokuva pamwe chete unokosha kukura sezvo vaviri. Nokupedza nguva pamwe chete, uchawana pfungwa dzenyu, manzwiro, uye matambudziko. With ichi chavanonzwanana nguva, chisungo wako kuchawedzerawo wezvamatongerwe ushamwari hwepedyo kuwedzera kudanana. The kiyi Rudo husingaperi ndiko kuva zvakanakisisa shamwari.
Step #6: Iva nomutsa mumwe wako
Kana ukafunga chinhu chakanaka, uti kuna mudiwa wako. Mutsa haiwanzowaniki asi simba kudanana hunhu. Nepo zvinoda munjodzi mutsa, pakupedzisira utsinye anodya kure pane kudyidzana apo mutsa yekurera.
Step #7: Rambai muchirezvana mupenyu
A kudanana rwendo kana wevaFiripi haisi chete kushamisika akakwana asi ruzivo kunobatsira kuchengetedza zvinhu zvipenyu uye wakazadzwa. Kuitirwa chinhu chitsva pamwe chete ichabatsira yokuburitsa zvinhu zvitsva uye zvinofadza pamusoro mumwe.
Achiwira murudo zvinonakidza, zvinokoshawo kuziva kuti nekuchiva uye kusimba hakuna kufanana madanana. Rudo Zvinoda ushingi uye basa, uye ndizvo Mubatanidzwa dzakasiyana zvinhu zvinoita kuti rudo rune simba. Asi kamwe rudo rinosvika kuti hwakasimba pamwero, zvinova rutsigiro chisingazununguki zvotsvuka, uye akwirwe kuti usingachengeteki kuputswa zvechokwadi.